लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट पार्टी अगाडि बढ्नुपर्छ | छलफल
लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट पार्टी अगाडि बढ्नुपर्छ
खोटाङ जिल्ला कमिटी, नेकपा
पूर्वउपाध्यक्षजी अहिले पार्टीको कुनै पनि जिम्मेवारीमा हुनुहुन्न तपाईंको भूमिका खोटाङे जनताले खोजिरहेका छन्, के गर्दै हुनुहुन्छ ?
अहिले हामी पार्टी एकीकरणको चरणमा छौं । जिल्ला तहसम्मको एकीकरण सम्पन्न भइसकेको छ । जनसंगठन एकीकरणको मूल काम पनि भइसकेको छ । अब यसको शपथग्रहण गर्ने बैठक बस्ने काम हुन्छ । स्थानीय तहका पार्टी कमिटी आएपछि कामको रफ्तार बढ्ने छ ।
जहाँसम्म मेरो भूमिकाको कुरा छ, म विगत २७ वर्षदेखि कम्युनिस्ट पार्टीको जिल्ला तहमा रहेर काम गरेको छु । पार्टीको विभिन्न तह हुँदै म यसभन्दा अगाडि उपाध्यक्षको रूपमा काम गरिरहेको थिएँ । अहिले मेरा खास जिम्मेवारी छैनन् । मलाई जिल्लाका धेरै साथीहरूले नेकपाको अध्यक्ष भएर काम गर्न भन्नुभएको थियो त्यसअनुरूप जिल्ला कमिटीले सिफारिस पनि गरेको थियो । कार्यकर्ताको चाहना पनि यही थियो तर अहिले हामी पार्टी निर्माणको संक्रमणकालीन अवस्थामा छौं । दुईवटा पार्टी मिलाउनु पर्ने त्यसको मूल नेतृत्वलाई मिलाउन नेताहरूले जोड कोण मिलाउनु पर्ने हुँदा पार्टी सचिवालयले पुराना दुईवटै पार्टीका प्रमुखहरूमध्येबाट एकलाई अध्यक्ष अर्कोलाई सचिवको जिम्मेवारी दिने भन्ने मापदण्ड बनायो । म त्यो मादण्ड अपनाउँदा मूल नेतृत्वमा परिन र अहिले जिम्मेवारीविहीन छु । यद्यपि, राजनीतिक काम नै गरिरहेको छु, जनताका काममा नै व्यस्त छु । हालै सम्पन्न युवा संघको स्थापना दिवसको उपलक्ष्यमा आयोजित कार्यक्रममा विप्लव नेतृत्व छोडी हाम्रो पार्टी नेकपामा आउने ठूलो संख्याका युवा साथीहरूलाई प्रवेश गराउने कामको नेतृत्व गरी काठमाडौं आएको छु । अब यहाँ रहेका जिल्लाका नेता कार्यकर्ताहरूसँग भेटघाट गरी फेरि जिल्लामा जनताको काममा लाग्नेछु ।
त्यस्तो मापदण्ड नबनेको भए तपाईं अध्यक्ष बन्नुहुन्थ्यो ?
हाम्रो जिल्लामा हामीले महाधिवेशन प्रतिनिधिदेखि जिल्ला नेतृत्व चयन गर्दा सँधै सर्वसम्मत नेतृत्व चयन हुने अभ्यास छ, हामीले अहिलेसम्म सहमतिमै नेतृत्व चुनिरहेका छौं, विवाद छैन । यसभन्दा अगाडि २०७२ सालको अधिवेशनमा अर्को अधिवेशनमा मलाई नेतृत्व सुम्पन सहमति भएको थियो । तर, दुईवटा पार्टीबीच एकता भयो, त्यो खालको मापदण्ड बन्यो जसले गर्दा म जिम्मेवारीमा छुईन । देवान राई अध्यक्ष, बवी चाम्लिङ सचिव हुनुहुन्छ । उहाँहरू सक्षम नेता भएकोले पार्टी अगाडि बढ्ने कुरामा कुनै समस्या छैन । उहाँहरूलाई मेरो पनि साथ सहयोग रहन्छ । उहाँहरूसँगै रहेर पार्टीले ६ महिनाभित्र जिल्लामा अधिवेशन सम्पन्न गर्ने भनेको छ । त्यसैलाई पूरा गर्ने र जिल्लाका नेता कार्यकर्ताको भावनाअनुसार उहाँहरूले दिएको जिम्मेवारी सिरोपर गरेर जिल्लाको राजनीतिमै फेरी सक्रिय हुनेछु ।
अहिले नै जिम्मेवारी पाए हुन्थ्यो भनेर नेता कार्यकर्ताहरूसँग भन्नु भएको छैन ?
मलाई जिल्ला नेतृत्वको जिम्मेवारी दिने भनेर पहिले जिल्ला पार्टी कमिटीले सिफरिस गरेको थियो । त्यसअनुसार हुन्छ भनेर हामी ढुक्क पनि थियौं । तर मापदण्ड अर्को ढङ्गले बनेका कारण म त्यो मापदण्डमा पर्न सकिनँ र नेतृत्व गर्नबाट बाहिर परेँ । तर काम गरी नै रहेको छु । हालै मेरो सक्रियतामा नेकपा माओवादी विप्लव समूहमा करिब ८०।९० जनाको समूहलाई पार्टी प्रवेश गराउने सन्दर्भमा म काठमाडौं आएको छु । नेताहरूसँग छलफल परामर्श भइरहेको छ । काठमाडौंमा हुने नेता कार्यकर्ताहरूसँग पनि मेरो जिम्मेवारीका बारेमा सरसल्लाह भइरहेको छ ।
खोटाङ्गको नेतृत्व चयनमा असन्तुष्टि कतिको छ ?
सन्तुष्टि असन्तुष्टि होला । पाउनेलाई सन्तुष्टि होला नपाउनेलाई असन्तुष्टि होला तर मापदण्ड बनेर नेतृत्व छनौट भएपछि त्यसलाई स्वीकार गर्नैपर्छ । यद्यपि, हाम्रो जिल्लामा जो अहिले सचिवको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ उहाँ हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष र जिल्ला समन्वय समितिको अध्यक्ष भएर काम गरिरहनु भएको छ, उहाँले राम दंगाललाई जिल्ला अध्यक्ष बनाउनुपर्छ भनेर भनिसकेको अवस्थामा नेतृत्व जाम गर्ने विषय बनाएको हुँदा उहाँलाई सचिवमा राखेर काम लगानु भन्दा माथिल्लो कमिटीमा काम दिँदा उचित हुन्थ्यो । खोटाङ्गे नेता कार्यकर्ता र स्वयं उहाँको भावना पनि यही हो । तर त्यसो भएन, उहाँ सचिव हुनुहुन्छ, जिल्ला समन्वय र समितिको अध्यक्ष भएर काम गरिरहनु भएको छ । यस्तो अवस्थामा सन्तुष्टि असन्तुष्टि होलान् तर यस विषयमा मेरो कुनै असन्तुष्टि छैन । उहाँहरूले लाए अह्राएको काम गर्छु ।
पार्टी नीति, विधि, पद्धति, मूल्य, मान्यताअनुसार चलेन, कसैलाई काखा पाखा भयो, वर्ग पक्षधरता कमजोर भयो यसले पार्टी समस्या छ भन्ने सुनिन्छ के हो ?
समस्या छ, नेताहरूले कसरी पर्गेल्नु हुन्छ, थाहा छैन । एक वर्ष भयो पार्टी एकता अब सकिसकेको छ, कसैलाई दोहोरो तेहोरो जिम्मेवारी छ । कसैलाई छैन, यति धेरै नेता कार्यकर्ता छन्, निश्चित मान्छेका लागि पार्टी नेतृत्वले आँखा लगाउँछ र सक्रियलाई पाखा र आफ्नो चाकडी गर्नेलाई टिपेर माथि लाने लोकप्रिय र सक्रियलाई तल पार्ने लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट भन्दा टीको लगाएर नेता बनाउने गलत प्रथाको विकास हुन थालेको छ, कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ताबाट र नेता जनताबाट जाँचिनु पर्छ, यसमा तलमाथि हुनुहुँदैन । अहिले पार्टी संक्रमणकालमा छ । अहिलेलाई हामी भन्न डराएका छौं । तर लोकतान्त्रिक अभ्यासमार्फत् नेता जाँचिने कुरालाई कमजोर पार्नु हुँदैन । विभिन्न बहानामा नेतृत्व विकास गर्ने कुरालाई जाम गरेर राख्नु हुँदैन । नेतृत्वलाई विकास गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।
यो कुरा केन्द्रीय नेतृत्वलाई भन्नु हुन्न ?
भनेका छौं । मैले व्यक्तिगत रूपमा पनि कतिपय अवस्थामा भनेको छु । तर हाम्रो पार्टी नेकपा जनवादी केन्द्रीयताबाट सञ्चालन हुने भएकोले तलका नेता कार्यकर्ताले माथिका नेतालाई प्रश्न उठाउने, असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने काम हुँदै हुँदैन त म भन्दिनँ तर ज्यादै कम हुन्छ, भए पनि शिष्ट ढंगले हुन्छ । त्यसो नगर्दा पार्टीको अनुशासन भंग गरेको सन्दर्भमा कारबाहीको भागीदार बन्नु पर्ने अवस्था हुन्छ । जसले गर्दा त्यो भन्ने आँट सबैको हुँदैन । तर अहिले संक्रमणकालीन अवस्था भएकोले त्यो कुरा हामी मान्न तयार छौं । नेतृत्वले भनेको कुरा लागू हुन्छ नै तर यसपछि पार्टी नीति, विधि, सिद्धान्त र मापदण्डअनुसार चल्नुपर्छ । नेतृत्व छनौटको विषय पनि यसैगरी हुनुपर्छ । यो कुरालाई हामी जोडतोडका साथ अगाडि बढाउँछौं ।
दुई तिहाईको सरकारका कामलाई कसरी लिनु भएको छ ?
जनताको बलले नेकपाले अहिले दुई तिहाईको सरकार सञ्चालन गरिरहेको छ । त्यसको नेतृत्व पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरिरहनुभएको छ । उहाँले काम गरिरहनु भएको छ, जनतामा सपना देखाइरहनु भएको छ, तर जुन ढंगले गर्नुपर्ने हो, जनताका जुन आकांक्षा पूरा गर्नुपर्ने हो ती पूरा हुन सकेका छैनन् । यो कामको गतिलाई सरकारले बदल्नुपर्दछ र जनताले अनुभूत गर्ने गरी परिणाम देखिने गरी काम गर्नुपर्छ । तर सुरुवात राम्रै गरेको मैले ठानेको छु ।
तपाईं जिल्लाको नेता स्थानीय तहमा अहिले जनप्रतिनिधिहरूले व्यापक भ्रष्टाचर गरेको आँफै नीति बनाउने, आँफै निर्णय गर्ने, आँफै ठेक्का पट्टा गर्ने, आँफै डोजर किन्ने, पैसा असुली गर्ने र कर्मचारीलाई दोष दिने भनी व्यापक गुनासो आइरहेको छ नि ?
यो अहिलेको स्थानीय तहको मुख्य समस्या हो यो तपाईंले भनेको सबै ठाउँमा, सबै मान्छेलाई, सबै जनप्रनिधिलाई चाहिँ लागू हुँदैन तर यसको मात्रा ठूलो छ । आँफै माननीय, आँफै मेयर, आँफै गाउँपालिका अध्यक्ष, आँफै वडाध्यक्ष, आँफै निर्णय गर्ने तहमा बस्ने, आफू वा आफ्ना मान्छे ठेकेदार बन्ने, ठेक्का उसैलाई पार्ने र ऐन, कानुनविपरीत काम गरी आर्थिक शुभलाभ गर्ने काम अधिकांश ठाउँमा अधिकांश जनप्रनिधिले गर्ने गरेका छन्, यसले पार्टीलाई पनि बद्नाम गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई पार्टीको मूल जिम्मेवारीमा राख्नु हुँदैन । कस्ता कस्ता विकृति र विसंगतिपूर्ण काम गरिरहेका छन्, तिनको लेखाजोखा पार्टीले गर्नुपर्छ । सही काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने र खराब काम गर्नेलाई दण्डित गर्ने काम जिल्ला नेतृत्वले गर्नुपर्दछ । कतिपय अवस्थामा यस्तो हुन सकिरहेको छैन । अब यसको तयारी थाल्नुपर्छ माहुरी आफ्नै महमा डुबेर मरेजस्तो आफ्नै गल्तीले समग्र पार्टी बद्नाम हुनु हुँदैन स्वयं ऊ मौरी बन्न तयार हुनुपर्छ । यो पद्धतिको विकास केन्द्रदेखि गाउँ तहसम्म लैजानुपर्छ । यसो भयो भने यो समस्याको समाधान हुन्छ ।